Ny fahatapahan’ny lalan-drà amin’ny ankizy; ahoana no no ahafantarana azy
Zazakely mandeha rà tampoka : Fa maninona?
Tokony hanaitra ny ray aman-dreny foana ny rà mivoaka amin’ny zazavavikely, na mbola tena kely izy na efa lehibebe. Raha toa ka tsy nisy dona, amin’ny fotoana maha-mbola kely ny zaza,
Katrafay : Maneritery ny fivaviana!
Maro dia maro ireo fomba nentin’ireo olona fahiny atao ady gasy. Isan’izany ny fomba haneriterena ny fivaviana, indrindra ho an’ireo avy teraka, dia amin’ny alalan’ny fampiasana katrafay. Voalaza fa manamaina ny fery ihany koa io akora io.
« Fibrome » : Tokony didiana raha…
Isan’ireo aretina azo ambara hoe : sarotra ho an’ny vehivavy ny « fibromes ».
Mampihena ny kôlesterôly ratsy ny dia an-tongotra
Mbola aretina mifandraika amin’izao vanim-potoana misy antsika izao ny aretin’ny kôlesterôly.
Tsindahory : Ody havizanana, manasitrana kaikitry ny bibikely…
Satria mbola tsy nahalala izany alikaola na fanadiovana fery izany ny olona fahiny dia zava-maniry no nampiasainy. Ny « tsindahory » dia zava-maniry nentin’izy ireo hanamainana
Dite sy “jus” mampitony fanaintainan’ny fadimbolana
Fotoana iray iainana fanelingelenana maro ny fahatongavan’ny fadimbolana. Tsy tena tsara loatra anefa ny mihinana fanafody hampitoniana azy ireo, sao mampiankin-doha izany. Noni, dite sakamalaho no atoro anao!
Tosi-drà ambony : Azo tsaboina amin’ny fomba natoraly ve?
Be dia be isika no mampiasa ny akora natoraly entina hampidinana ny tosi-drà miakatra. Hoy ny mpitsabo momba azy ireny.
Aretina tsy vaovao amintsika ny “AVC”. Raha ny olon-dehibe no tena tratran’izy ity dia fantaro fa ny ankizy ihany koa dia mety ho tratra ny AVC saingy tsy hitan’ny Ray aman-dreny izy io raha tsy rehefa lehibe ilay zaza.
Marihina fa ny antony mahatonga ny “AVC “ dia fahatapahan’ny lalan-drà tampoka eo anivon’ny ati-doha. Vao teraka ka mitohy hatramin’ny faha 16-taonany eo ny zaza no mety ho tratran’izy ity. Mba ahafahana mitsabo azy haingana dia tsara ny mijery ireto fihetsika ireto.
Ireo fihetsika voalohany hamantarana ny “AVC” amin’ny ankizy:
Mety ho tratra ny AVC ny zaza raha toa ka ahitana ireto tranga telo ireto.Voalohany dia ahitana tsy fahalavorariana ny vava. Ankoatr’izay dia mareforefo ihany ny ilan’ny vatan’ilay ankizy;mety ny tanany na ny ranjony. Farany dia miankanankana ilay zaza rehefa miteny.
Ny zavatra tokony atao ahitana ireo fihetsika ireo:
Zavatra telo no tokony atao amin’ny zaza mba ahitana ireo famantarana ireo. Voalohany dia asaivo mitsiky ilay zaza dia amin’iny no ahitanao raha misy tsy fahatomombanana ny vavany. Faharoa dia asaivo mamerina fehezanteny tsotra izy ary farany dia asaivo manainga ny tanany roa izy.Raha sarotra ho azy ny manatanteraka ny iray amin’ireo dia tsara raha ho entina manatona mpitsabo faran’izay aingana ilay zaza. Ankoatra ireo ny maso manjavozavo sy ny aretin’andoha miampy fandoavana tampoka ary ny fahaverezan-tsaina tampoka dia anisan’ny fambara ny mety ho fisian’ny AVC.
Ny fomba hamatarana ny AVC ho an’ireo zazakely vao teraka ka hatramin’ny 5 taona:
Matetika dia samihafa tsy toy ny an’ny olon-dehibe ny fitrangany satria mbola ao anatin’ny fitombohana tanteraka ny ati-dohan’ny zaza amin’io taona io.
· Raha ho an’ny zaza latsaky ny 28 andro; fihetsika miverimberina amin’ny tarehy,indraindray ny maso na ny finonoana ny tanana,variandriana , mijanona tampoka ny fitempon’ny fo.
· Raha ho an’ny zazakely 29 andro no miakatra dia ireto indray ny mety ho famantarana; ny fahamafisan’ny taolana sasany,tanana matetika mivonkona,manao krizy tampoka.
Vahaolana manoloana ireo:
Tsy misy afatsy ny fanatonana mpitsabo haingana ihany no tena vahaolana mety raha toa ka ahitana ireo endri-javatra ireo ny zaza.